The Semalt Islamabad Expert: How To Block WP Referrer Spam Mu Google Analytics
Inotumira spam muGoogle Analytics yava nyaya huru. Pamusana pemafashamo ekutsvaga spam kubva kune mawebsite makuru uye nhepfenyuro yevanhu, webmasters vakagumburwa nemafuta akasiyana-siyana uye vanoshandisa dzimwe nzira kudzivirira kutsika kwepamusoro kwekutsvaga kuparadza nzvimbo dzavo.
Hapana chikonzero chekutya sezvo zvichibvira kudzivisa WordPress referrer spam mune account yako yeGoogle Analytics - online casinos that accept us players. Sohail Sadiq, nyanzvi inotungamirira kubva kune Semalt , anoudza pano kuti angaita sei izvi kubudirira.
Kutanga neGoogle Analytics
Kana webhusaiti yako iine zvakawanda zvekutengesa uye iwe ukaona dzimwe sangano re spam mu account yako yeGoogle Analytics, iwe unogona kubvisa izvozvi zvigaro sezvo zvingakutungamirira kuti uone pane mawebhusayithi ane utsinye. Kana iwe usina kushandisa Google Analytics paWebsitePress website yako, iwe unofanira kuisa WordPress plugin uye ita kuti ibatanidzwe mubhuku rako re analytics.
Google Analytics chinhu chinoshamisa uye chinoshanda chinoita kuti uone kuti vashanyi vanobatana sei nemapeji ewebhu. Unogonawo kutarisa mapeji ayo vashandisi vakaita seainyanya, vanogona kutarisa zvisikwi pahutano hwako uye kuita mamwe mabasa akafanana.
Kana uchida kuti nzvimbo yako ionekwe, iva nechokwadi chokuti wakabvisa referrer spam kubva panzvimbo yako. Referral spammers nevashambadzi vanoshandisa zvido zvenyu uye vanotumira mazita URL nezvinyorwa zvakanyorwa nemazana kuzviuru zvemabloggi uye mawebsite mazuva ose. Aya ma URL anowanikwa mumabhadharo eGoogle Analytics nemamwe mabasa pasina nguva. Uchitarisa kuti ivo vachaita kuti nzvimbo yako ive nzvimbo, iwe unofanira kuongorora nzira dzekuvabvisa nadzo nokukurumidza sezvinobvira.
Ndinoita sei neReferrer Spam?
Unogona kushandisa Sucuri kutarisa tsvaga yehutano..Sucuri kwete chete inodzivirira nzvimbo yako neTrojans uye malware asi inodzivisa referrer spam zvachose. Sucuri Website Firewall ndechimwe cheShoko rakanakisisa reWePress raunogona kushandisa kuti ubvise referrer spam. Dare rayo rakazvitsaurira uye rakaoma-kushanda, uye vatengi vanopiwa nemashoko ekuti nzvimbo dzavo dziri kuwedzera sei.
Bvisa Referrer Spam muShokoPress nePurgin
Imwe nzira yekudzivirira referrator spam pane yako WordPress website ndeyokushandisa zvakasiyana WordPress plugins. Aya mapulagi ane zvakawanda zvingasarudzwa, uye unogona kuvashandisa kuti vadzivise kutumira spam. Chinhu chokutanga chaunofanira kuita ndechekudzivirira, kuisa nekugadzirisa purogiramu yakakodzera, uye tinokurudzira kuti ushandise Plugin SpamReferrerBlock. Kana ukangoshandiswa zvizere, unofanira kuenda kuZvirevo »Spam Referrer Block uye kugadzirisa zvirongwa zvepachikwata ichi kuti utange.
Dzorerai Mafiro eMweya neGoogle Analytics Filters
Unogona kubvisa referrer spam ne filters yeGoogle Analytics. Kana vaparadzi vanokutumirai zvikumbiro zvinopfuurira, vangave vakatsvaga ma code ako ekutevera. Vanoshandisa code iyi kuti vaone niche uye maitiro ewebsite yenyu. Vakawanda ve webmasters vanowedzera mafaira kuGoogle Analytics account, apo vanoisa masayiti akavanetsa ndokuvabvisa mukati memaminitsi. Enda kuGoogle Analytics account uye enda kune Vateereri »Technology» Chikamu che Network. Pano unofanirwa kusarudza Hostname sechinhu chakakosha uye edza kuwedzera migumisiro kune imwe sarudzo yeMwedzi. Zvimwe zvemasita mazita aunofanira kuwedzera pano ndewe wpbeginner.com, darodar.com, nevamwe.
Unogonawo kudzivisa huwandu hwemutauri spam neGoogle Analytics filters. Endai kuZvinyorwa Zvisingabatanidzi muChitsananguro cheGoogle Analytics uye kudzivirira URLs seye buttons-for-website.com, blackhatworth.com, darodar.com, uye anticrawler.org.